‘कोही भोकै पर्दैन,भोकले कोही मर्दैन’नारा भट्याएर मात्र हुँदैन, विपन्न परिवारलाई मासिक ५/५ हजार उपलब्ध गराऔँ: डा. भट्टराई – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/‘कोही भोकै पर्दैन,भोकले कोही मर्दैन’नारा भट्याएर मात्र हुँदैन, विपन्न परिवारलाई मासिक ५/५ हजार उपलब्ध गराऔँ: डा. भट्टराई
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अति विपन्न परिवारलाई मासिक ५/५ हजार उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।समाजिक सञ्जाल ट्वीटमार्फत डा भट्टराईले अति विपन्न परिवारलाई मासिक ५/५ हजार उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । उनले ‘कोही भोकै पर्दैन,भोकले कोही मर्दैन’नारा भट्याएर मात्र गरीबीमुक्त नहुने बताएका छन् ।
डा भट्टराईले ट्वीटमा ‘कोही भोकै पर्दैन,भोकले कोही मर्दैन’नारा भट्याएर मात्र यी मुसहर किशोरी आमा/शिशुको भोक/कुपोषण हट्थ्यो भने मबिबि शाहको कविताले उहिल्यै देश गरीबीमुक्त भैसक्थ्यो। अत: तत्काल ३ तहका सरकारको संयोजनमा अति विपन्न परिवारको बैंक खाता खोलेर कम्तिमा मासिक ५/५ हजार दिऊँ न ! तब आजै भोकले कोही मर्दैन !’ देखेका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै प्रधानामन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरिवीका कारण कुनै पनि नेपाली ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’ भनेका थिए । तर, देशमा कारोना महामारीको प्रकोप बढेसँगै भोकमरी शुरु भएको छ ।कोरोना भाइरसका कारण विश्व त्रसित छ। विभिन्न देशले सुरक्षित हुनका लागि आफ्नो देश बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेका छन्। नेपाल पनि अहिले पूर्ण रुपमा लकडाउन भएको छ। सरकारले कसैलाई पनि बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ।
खाद्यान्न र अत्यावश्यक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द छ। नेपाल भित्रने र बाहिरिने सबै नाका बन्द छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालका बिभिन्न ठाउँहरुमा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनु स्वभाविक भएको स्रोतले दावी गरेको छ ।